तपाईंको स्क्वायरस्पेस साइटलाई अधिक गतिशील बनाउने १० तरिकाहरू - Print Peppermint
तपाईंको स्क्वायरस्पेस साइटलाई अधिक गतिशील बनाउने १० तरिकाहरू
जुन 28, 2020 | ब्रान्डिङ, डिजाइन, सूची, सुरूवात
यदि तपाईंले स्क्वायरस्पेस प्रयोग गरेर आफ्नो वेबसाइट प्रबन्ध गर्न सुरू गर्नुभयो भने, साइटका डिजाइन सुधार गर्न केहि सुझावहरू आवश्यक छन्। सुधारिएको वेबसाइट डिजाइन पक्कै हुनेछ ब्रान्ड संलग्नता बढावा जब सही भयो। तपाईं एक स्क्वायरस्पेस वेबसाइट कसरी अधिक गतिशील बनाउन सक्नुहुन्छ? यहाँ व्यवसायिक मालिक वा बजारका रूपमा जान्नुपर्ने उत्तम प्रविधिहरू छन्:
एनिमेटेड स्लाइडशो प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाईंसँग सीमित स्थानको साथ तपाईंको गृह पृष्ठमा समावेश गर्न धेरै छविहरू छन् भने, तपाईं एनिमेटेड स्लाइड शो प्रभाव प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो साइटको पृष्ठको निश्चित भागमा स्लाइड शो जस्ता विभिन्न छविहरूमा चक्र गर्दछ जुन एक तस्वीर द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ। छवि ग्यालरी दृश्य एक GIF समान अनुभव प्रदान गर्दछ।
तपाईंसँग प्रत्येक छविको बिचमा लाग्ने समय माथि पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ। तसर्थ, यदि एउटा छविमा महत्त्वपूर्ण जानकारी छ भने तपाईले दर्शकहरूलाई हतार बिना सामग्री राम्रोसँग पढ्नको लागि लामो समय सीमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सामग्रीको लागि, केवल पेशेवरलाई विश्वास गर्नुहोस् असाइनमेन्ट मद्दत एक प्रतिष्ठित नाम जस्तै बाट निबंध ब्रह्माण्ड.
एक घोषणा पट्टी प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्नुहोस्
यदि तपाईं एक विशेष प्रस्ताव अभियान जस्तै छूट वा सस्तामा चलाइरहनु भएको छ भने, घोषणा बारको उपयोग गरेर पर्याप्त हुन सक्छ। यसले आगन्तुकहरूको ध्यान खिच्न सक्छ र अधिकतम संलग्नता प्राप्त गर्न सक्छ। साथै, यो तिनीहरूको दृश्य रोक्न वा उनीहरूको स्क्रीनहरूको एक ठूलो संख्या लिई आगन्तुकहरूको मार्गमा प्राप्त गर्दैन।
अर्को फाइदा यो हो कि यो पर्दाको शीर्षमा रहन सक्छ ग्राहकहरू म्यानुअल रूपमा बार बन्द नगरेसम्म। तपाईं र colors्गहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन जरुरीलाई निम्त्याउनुहोस्, जस्तै रातो, अधिकतम स engage्लग्नता प्राप्त गर्न।
लंबन प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहोस्
एक लम्बाई एक तत्व हो जसले छविहरूलाई देखा पर्दछ जस्तो गरी ती दिशाहरूसँग तपाईंको अघि बढिरहेका छन्। लंबन पृष्ठभूमि पृष्ठ धेरै धेरै सामग्री बिना उपयुक्त छ किनकि उनीहरूलाई आवश्यक सबै ध्यानहरू प्राप्त गर्दछन्।
तपाईं यो सुविधा सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ साइट शैलीमा हेडिंग गरेर र त्यसपछि लंबन प्रभाव सक्षम गर्नुहोस्। यो साइटलाई अधिक गतिशील र अन्तर्क्रियात्मक बनाउन एक सरल विधिहरू मध्ये एक हो।
अर्को सरल विधि जुन तपाईंको जीवनलाई सजिलो बनाउन सक्दछ यदि तपाईं विद्यार्थी हुनुहुन्छ जो धेरै समय अनलाइन खर्च गर्नुहुन्छ भने प्रयोग गर्नु हो निबन्ध लेखन सेवा युके तपाइँको सबै थिसिस र शोध प्रबंध सम्बन्धित असाइनमेन्ट मद्दत कि तपाईंलाई समय समयमा समय चाहिन्छ।
भिडियो पृष्ठभूमि विचार गर्नुहोस्
तपाईं म्यूट स्पीडस् प्रयोग गरेर घर पृष्ठको पृष्ठभूमिको रूपमा भिडियोहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो पृष्ठभूमि दृश्यको रूपमा वेबसाइटमा समावेश गर्न YouTube वा Vimeo मा अपलोड गर्नुपर्नेछ। केहीले यो पृष्ठभूमिलाई उत्तम भन्छन किनकि यसले साइटमा अधिक आन्दोलन थपेको छ र वेबसाइटलाई रमाईलो बनाउँछ।
भिडियो हेडलाई सेटिंग्समा समाहित गर्न र सेक्शन लेबल गरिएको मिडिया वा ब्यानर चयन गर्न। पछि, भिडियो छनौट गर्नुहोस् र त्यसपछि प्रतिलिपि गरिएको यूट्यूब वा लक्ष्य मिडियाको Vimeo लिंक टाँस्नुहोस्। त्यस पछि, भिडियो पृष्ठभूमिको रूपमा गृह पृष्ठमा एक लुपमा हुनेछ।
पूर्ण पृष्ठ गैलरी पृष्ठभूमि
स्लाइडहरू जस्तो स्लाइडहरू अन्तर्गत तस्विरहरूको साथ अन्तर्क्रियात्मक पृष्ठले आगन्तुकहरूको लागि सुन्दर वातावरण सिर्जना गर्न सक्दछ। आश्चर्यजनक आधुनिक र प्रामाणिक छविहरूको प्रयोगले चालमा भर पर्न सक्छ, तपाइँ उद्योगमा निर्भर गर्दै।
पृष्ठभूमि माथि, तपाईं पारदर्शी वा केही अस्पष्टताको साथ पाठ बक्स थप्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यसलाई ईन्डेक्स पृष्ठमा ग्यालरी पृष्ठ समावेश गरेर थप्न सक्नुहुन्छ। पछि, ग्यालरीमा छविहरू थप्नुहोस् र सन्देश लेख्नुहोस् जुन पाठ बाकसमा हुनेछ।
लेखन पनि यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ जब यो तपाईंको शैक्षिक असाइनमेन्टहरूको लागि आउँछ। माथि उल्लेख गरिए अनुसार, यदि तपाईं विद्यार्थी डिजाइनर हुनुहुन्छ भने, मार्फत जानुहोस् कलेज कागज ..org समीक्षा तपाइँको प्राप्त गर्न कलेज कागजातहरू पेशेवर शैक्षिक लेखकहरूको सहयोगमा गरियो।
GIFs प्रयोग गर्नुहोस्
GIF हरू सुन्दर दृश्यहरू हुन् जुन अन्तर्क्रियात्मक वेबसाइट दृश्यमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ जुन लक्षित दर्शकहरूको आँखा समात्न पर्याप्त आन्दोलन गर्दछ। तिमी सक्छौ GIF डिजाइन गर्नुहोस् आफैंलाई स्क्र्याचबाट वा तिनीहरूलाई फोटो फोटो ग्यालरीबाट स्रोत दिनुहोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले प्रयोग गर्नु भएको भिजुअलहरू व्यवसाय र यसको छनौट को लागी प्रासंगिक छन्।
साथै, GIF हरुको प्रयोग नगर्नुहोस् किनकि उनीहरूले नियमित तस्विर भन्दा बढी ठाउँ लिन्छन्। यसैले, तिनीहरूले साइटलाई ढिलो गर्न सक्दछ, त्यसैले तिनीहरूलाई आवश्यक भएमा मात्र प्रयोग गर्नुहोस् वा केही समय पछि।
एनिमेटेड सामग्री ब्लकहरू
नयाँ पृष्ठ खोल्दै र सामग्री ब्लकलाई बिस्तारै पृष्ठभूमि छवि माथि देखा पर्दा वेबसाइटले अधिक परिष्कृत देखिन्छ। निस्सन्देह, एनिमेसन सामग्री ब्लकले प्रयोगकर्ता ईन्टरफेसमा सुधार गर्न सक्दछ र यसलाई आधुनिक रूप र अनुभव ल्याउन सक्छ।
त्यो साइट अधिक गतिशील अपील र प्रयोग गर्न उत्साहजनक बनाउँछ। तपाईं यो पृष्ठ को पृष्ठ को पृष्ठ सहित वेबसाइट को कुनै पनि सेक्सनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एनिमेटेड सामग्री ब्लकले प्रयोगकर्ताहरूलाई वेबसाइटमा धेरै समय खर्च गर्न, एसईओ प्रयासहरूमा योगदान पुर्‍याउन योगदान पुर्‍याउँछ।
बटन होभर एनिमेशनहरू
तपाईंको साइटलाई अधिक गतिशील बनाउने अर्को प्रभावकारी तरीका भनेको तपाईंले वेबसाइटमा प्रयोग गर्नुहुने बटनहरूका लागि होभर प्रभाव थपेर हो। एक बटन होभर प्रभाव हुनु वेबसाइट ग्राहकहरु मा छन् को सेक्सन को संकेत दिन्छ र स्पष्ट रूप मा चिनाउन सक्छ कि यदि यो तिनीहरू लिन चाहेको कार्य हो भने।
बटन होभर प्रभावको साथ, ग्राहकहरू जारी राख्नुको सट्टा रद्द क्लिक गर्ने संभावनाहरू कम हुन्छन्। तपाई स्क्वायरस्पेस वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ तपाई सबै बटनमा यो सुविधा समावेश गरी अधिक गतिशील प्रबन्धन।
छवि होभर प्रभाव
प्रयोगकर्तालाई एक आकर्षक अनुभव को लागी, तपाई यो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ छवि होभर सुविधा स्क्वायरस्पेसमा उपलब्ध। यस सुविधाको कार्यक्षमता भनेको यो छ कि ग्रेस्केल देखा पर्दछ तर एक पटक तपाईं यसको कर्सर होभर, फोटो जीवन आउँछ र रंग हुन्छ।
तपाईं केहि छिटो सीएसएस कोड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यसको लागि, तपाईंले आशा राख्नु भएको जस्तो निर्भरतामा। यस प्रकारको प्रभाव प्रयोग गरी छविहरूले प्रयोगकर्ता अनुभवलाई अधिक इमर्सिभ र आकर्षक बनाउन सक्दछन्।
यदि तपाईं सूचीमा थप ठेगानाहरू प्राप्त गरेर तपाईंको ईमेल मार्केटिंग अभियानलाई बढावा दिन चाहनुहुन्छ भने, पूर्ण पृष्ठ पप-अप आगंतुकोंलाई तिनीहरूको विवरणहरू प्रविष्ट गर्न प्रेरित गर्न सफल हुन सक्दछ। तपाईंसँग बक्समा डिजाइन र सन्देशको पूर्ण नियन्त्रण छ, त्यसैले कार्यक्षम सीटीए प्रयोग गर्नुहोस् र ग्राहकमा बोर्डमा ल्याउन प्रतिलिपि गर्नुहोस्।
तपाईले चयन गर्नुभएको टेम्प्लेटको बाबजुद, तपाई त्यो हुनुहुन्छ जसले छवि छान्नुहुन्छ जुन देखिनेछ। सुविधा ड्यासबोर्डबाट मार्केटिंग सेक्सनमा गएर सक्षम गर्न सकिन्छ, त्यस पछि, प्रचार पप-अप चयन गरेर।
तपाईंको स्क्वायरस्पेस साइटलाई अधिक गतिशील बनाउँदा थोरै इशाराहरू लिन्छन्, छवि होभर प्रभावहरू, भिडियो पृष्ठभूमि, वा अन्य तत्वहरू सहित। साइट जति सुन्दर देखिन्छ, यसले उच्च यातायातको दर प्राप्त गर्ने अवसर खडा हुन्छ।
“W तरीकाहरू तपाइँको" नयाँ सामान्य "eCommerce च्यानलको साथ विन
PANTONE® कलर ब्रिज ™ CMYK पीसी - प्रक्रिया रङ सन्दर्भ चार्ट नि: शुल्क डाउनलोड →